‘आज पृथ्वी जयन्ती, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गरिदै” – Life Nepali
‘आज पृथ्वी जयन्ती, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गरिदै”
काठमाडौं २७ पुस । नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शा’हको यो’गदान स्म’रण गर्दै आज पृथ्वी ज’यन्ती म’नाइँदै छ । गो’र्खाली राजा न’रभूपाल शाह र रानी कौ’शल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा वि.सं. १७७९ पुस २७ गते ज’न्मिएका शा’हले बा’इसे–चौ’बीसे रा’ज्यमा छ’रिएर रहेका राज्य’हरुलाई ए’कत्रित” ग’रेर आ’धुनिक नेपाल नि’र्माण गरेका” थिए । भौ’गोलिक रूपमा नेपाल ए’कीकरण” गरेकाले शाहलाई राष्ट्र निर्माताको” उपमा समेत” दिने गरिएको छ ।
य”द्यपि, उनको आ’लोचना” पनि उत्तिकै” हुने गरेको छ । आलोचकहरुले एकल” जाति–नश्ल, एकल संस्कृति, एकल” धर्म र सम्प्रदायको “वर्चस्व स्थापित” गरेको भन्दै उनी राष्ट्र निर्माता नभएको तर्क गर्ने” गरेका छन् । पृथ्वी ज’यन्तीको अवसरमा विगतमा सार्वजनिक” बिदा दिइने गरेको” थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षयता बिदा क’टौती” भएको छ । य’द्यपि, राजनीतिक दलसँगै नागरिकस्तरबाट” पृथ्वी ज’यन्ती म’नाइने गरेको छ ।
यस वर्ष पनि राष्ट्रिय” प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले विविध०” कार्यक्रम गरी “पृथ्वी जयन्ती” मनाउँदैछन् । नेपाली से’नाले गोरखाबाट सुरु गरेको ‘पदयात्रा पनि आजै सिंहदरबार’ अगाडि समापन’ गरिँदै छ । “पृथ्वीनारायण शाहले” नेपाल एकीकरणका क्रममा गोरखाबाट” काठमाडौंसम्म हिँडेको” बाटो हुँदै पदयात्रा” गरिएको हो ।
Previous नेपाल रेल-विधेयक : चालक र सहचालकको यो’ग्यता ‘प्लस टु’ पास हुनुपर्ने !
Next प्रदेश ३ को नाम बाग्मती प्रदेश राजधानी हेटौंडा”बहुमतले पारित